Nbudata Rummy Tour maka gam akporo [App] - Luso Gamer
Nbudata Rummy Tour maka gam akporo [App]
January 14, 2022 by John Smith
Ngwa egwuregwu anyị na-ewetara ebe a taa metụtara ịgba chaa chaa n'ịntanetị na ịkpata ego. Ugbu a na-etinye ngwa Rummy Tour n'ime ama gam akporo. Nwere ike ikwe ka ndebanye aha na ndị otu ọbịa ka ha gwuo wee nweta uru na-akparaghị ókè ozugbo.
Ngwa egwuregwu anyị na-akwado ebe a bụ gọọmentị ma na-enye ọtụtụ ịgba chaa chaa na egwuregwu arcade n'ime. Usoro nke echichi na ojiji nke ngwa faịlụ dị mfe. Otú ọ dị, ndị ọhụrụ ahụ yiri ka ha amachaghị ikpo okwu.
Na inwe mgbagwoju anya mgbe ị na-enweta gbakwunyere egwuregwu. Echegbula onwe gị maka nke ahụ n'ihi na ebe a, anyị ga-atụle usoro niile isi na nkenke na n'ụzọ ziri ezi. N'ihi ya, ị hụrụ n'anya n'elu ikpo okwu na njikere iri uru nke ya wee wụnye ya n'ime gam akporo ama.
Kedu ihe bụ Rummy Tour Apk
Rummy Tour Android bụ ikpo okwu egwuregwu kaadị smart n'ịntanetị nke Cross Interactive haziri. Ihe kpatara ịhazi ikpo okwu ọhụrụ a pụrụ iche bụ iji nye ebe nchekwa dị n'ịntanetị. Nke ahụ na-enye ohere ka ndị otu edebanyere aha na-egwu egwuregwu dị iche iche.
Ọchịchọ maka ụdị egwuregwu ịgba chaa chaa n'ịntanetị na-eto nke ukwuu mgbe ọnọdụ ọrịa ahụ gasịrị. Ebe a na-akpọchi ụwa niile. Ọbụna ọtụtụ nde mmadụ tụfuru ọrụ ha n'ihi mkpọchi a dị ugbu a.
N'ime ụlọ ọrụ ndị bụ isi dị ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ na-amalite ịrụ ọrụ ha n'ịntanetị. N'ịgbaso usoro smart yana iji teknụzụ kachasị ọhụrụ, ndị mmepe ahụ hazikwara ọtụtụ nyiwe ịntanetị. Ebe ndị na-agba chaa chaa nwere ike ịkpata ego na-ekere òkè n'ịntanetị.
Ugbu a ọ dịghị mgbe a chọrọ ha ka ha gaa cha cha ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ikpo okwu maka ịgba chaa chaa. Ihe niile ha chọrọ ime bụ naanị nbudata otu ngwa ma nwee ọ enjoyụ Nweta & gwuo egwu. Cheta ma ndị edebanyere aha na ndị ọbịa nwere ike isonye.
aha Njem njem Rummy
Mmepụta Ram Ha
Aha ngwugwu com.rmytourvmbslkj.jhyuvvv
Achọrọ gam akporo 4.4 na gbakwunyere
Category Apps - Cha cha
Iji mee ka usoro azụmahịa dị nro, ndị mmepe na-akụnye usoro ịkwụ ụgwọ a dị elu. Nke ahụ na-enye ndị sonyere ohere ịdọrọ na itinye ego n'ịntanetị na-akwụ obere ego. N'ịtụle nchekwa onye ọrụ na-agbakwunyere nzuzo a dabere na agha.
Nke pụtara na ugbu a, ndị egwuregwu anaghị echegbu onwe ha maka ego ha. N'ihi na agbakwunyere nzuzo nzuzo kachasi ike n'ụwa maka ndị sonyere. Ewezuga ịgbakwunye nzuzo nzuzo a dị elu n'ime ngwa ahụ.
Ndị mmepe gbakwunyekwara ngwa mgbakwunye Multilingual nwere sistemu nkwado 24/7. Ngwa mgbakwunye ọtụtụ asụsụ ga-ahapụ ndị ọrụ ịsụgharị ọdịnaya ngwa n'asụsụ dị iche iche. Asụsụ ndị a kacha akwado bụ Bekee, Hindi, Urdu na ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ndị ọkachamara na-agbakwunyere 24/7 ndụ ahịa na-elekọta ndị ahịa. Nke ga-enyere ndị sonyere na nsogbu aka ozugbo n'egbughị oge. E nwere ọtụtụ dị iche iche online ịgba chaa chaa egwuregwu na-kwukwara.
Ndị ahụ bụ Ludo, kaadị iri, mgbanwe, Andar Bahar, Rummy, Teen Patti, 10 Up Down, Poker na ndị ọzọ. Cheta maka mkpụrụ ego nsonye nwere ike ịchọ. Yabụ ị nwere ikike dị njikere ịka nka egwuregwu pụrụ iche wee wụnye nbudata Rummy Tour.
Apk faịlụ bụ n'efu ka nbudata.
Ịwụnye ngwa ahụ na-enye ohere ịnweta ọtụtụ egwuregwu ozugbo.
Ndị ahụ gụnyere Teen Patti, Poker, Andar Bahar na ndị ọzọ.
Egwuregwu Ludo ama ama dịkwa ka egwu.
Enweghị mgbasa ozi ndị ọzọ edobere.
A na-agbakwunye usoro ịkwụ ụgwọ dị elu.
Mkpụrụ ego ọla edo nwere ike ịchọ maka nsonye.
Nseta ihuenyo nke ngwa
Otu esi ebudata ngwa nlegharị anya Rummy
Ọ bụrụ na anyị kwuru maka nbudata nke faịlụ Apk mbụ. Mgbe ahụ ndị ọrụ gam akporo nwere ike ịtụkwasị obi na webụsaịtị anyị n'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị naanị anyị na-ekekọrịta ezigbo faịlụ Apk mbụ. Iji hụ na nchekwa na nzuzo nke ndị egwuregwu.
Anyị goro otu ọkachamara nke nwere ndị ọkachamara dị iche iche. Ọ gwụla ma ndị otu ahụ ji n'aka na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma, anyị anaghị enye faịlụ Apk n'ime ngalaba nbudata. Ka ibudata ụdị ịgba chaa chaa emelitere, biko pịa njikọ enyere n'okpuru.
N'ezie, ngwa anyị na-akwado ebe a n'ime ngalaba nbudata bụ nke mbụ. Ewezuga faịlụ ngwa na-enye ozugbo n'ime ngalaba nbudata. Anyị wụnye ya n'ime dị iche iche gam akporo smartphones. Mgbe wụnye ngwa ahụ, anyị hụrụ na ọ dị nchebe n'ihe gbasara ojiji.
Ebe a na webụsaịtị anyị anyị ebipụtala ọtụtụ ngwa cha cha ndị ọzọ. Nke na-ewu ewu ma na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ gam akporo. Iji kporie ndụ egwuregwu ndị ọzọ biko soro njikọ. Ndị ahụ bụ River Monster 777 Apk na Egwuregwu Sunny Apk.
N'ihi ya, ọ na-amasị gị ịme egwuregwu ịgba chaa chaa na ịchọ ikpo okwu echekwara n'ịntanetị. Nke ahụ na-enye ma ndị debanyere aha na ndị ọbịa ohere igwu egwu na sonye. Mgbe ahụ tụnye ndị fan ahụ budata ma wụnye Rummy Tour Apk site na ebe a.
Categories Cha cha, Apps Tags Gwuo & Nweta, Njem njem Rummy, Rummy Tour Apk, Ngwa Tour Rummy, Nbudata njegharị Rummy Mail igodo
Nbudata Injector Skin Skin efu maka gam akporo 
Nbudata ihe nchọgharị dị ọcha Pro maka gam akporo 